उत्तम कार व्हील क्लीनर - रिमलाई मूल चमकमा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।
घर / उत्पादन / उत्तम कार व्हील क्लीनर
कार व्हील क्लीनर
उत्तम रिम क्लीनर थोक
छिटो हटाउनुहोस् र गन्दा तोड्नु! तपाईको गाडीको कुन अंश सबैभन्दा टाढा छ? तपाईंको पा wheel्ग्रा! गर्मी, खराब मौसम र लगातार ब्रेक दूषित पदार्थहरूका बीचमा तपाईंको पाels्गाहरू लगभग तुरून्त फोहोर हुन्छन्। OPS रिम क्लीनर भारी ब्रेक धूलोलाई लक्षित गर्न र तपाईंको पाels्ग्राहरूलाई निष्खोट छोड्नका लागि विशेष रूपमा इको-मैत्री सफाई पाउडर तयार पारिएको हो। सफा गर्नुहोस्, धुनुहोस् र तपाईंको ह्विल टबलाई मूल चमकमा पुनःस्थापित गर्नुहोस्! हामी ग्राहक सेवा र सन्तुष्टिमा गर्व गर्छौं र विश्वास गर्दछौं कि क्रोम रिम क्लीनर बजारमा अनुकूल उत्पादन हो।
♣ OPS व्हील र टायर क्लीनरहरू
♣ 500G पाउडर, प्लास्टिकको थलो वा प्लास्टिक बक्समा प्याक गरिएको छ।
♣ विभिन्न वाहनों को सफाई को लागि उपयुक्त उपयुक्त।
♣ गहिराइको आन्तरिक घुसाउनुहोस्, तुरुन्त भंग गर्न।
रिम क्लीनर, OEM / ODM सेवा, थोक।
तपाईंले पेशेवर कार रिम क्लीनर प्रयोग गर्नुपर्छ।
तपाईं यी सबै प्रश्नहरू थाहा छ? जिद्दी दाँत, तेल गहिरो, लोहे पाउडर, पहेंलो पहिया सफा गर्न केही गाह्रो छ, एक अपरिपक्व सफाई एजेन्ट संग धूल, ओक्सीकरण र कमीले भरिएको भरी। पाङ्ग्राहरूको ग्लेमिंग सेट एक साधारण बनाउन सकिन्छ, प्रयोग गरिएको वाहन नयाँ देखा पर्दछ। र केहि समय र साथ सही सफाई उत्पादन प्रयोग गर्नुहोस्, उचित तरीका, त्यसपछि तपाईं राम्रो पहल तिर आफ्नो पहिया लिन सक्षम हुनुहुन्छ। ब्रेक धूल, एक चिपचिपा पदार्थ जब तपाइँ ब्रेकहरू लागू गर्नुहुँदा घर्षणको कारण अत्यन्तै संक्षारक हुन्छ र यदि यो कार चक्र हब धेरै लामो हुन्छ भने स्थायी हानि हुन सक्छ। यसैले तपाईका पाङ्ग्राहरू नियमित रूपमा नियमित रूपमा सफा हुनुपर्छ।
क्रोम पहिएहरू कसरी ब्रेक धूल सफा गर्न सकिन्छ?? कम से कम एक तेजी देखि विलंब, मजबूत decontamination क्षमता हुनु पर्छ र पहिया नोकसान छैन!
किन यो सर्वोत्तम भनिन्छ व्हील र टायर क्लीनर?
हामीसँग उन्नत अनुसन्धान, विकास प्रविधि छ, हरेक वर्ष नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्न वैज्ञानिक कर्मचारीहरू छन्। हाम्रो मिश्र धातु पहिए क्लीनर शक्तिशाली विरूपण कारक, एसिड-फ्रिक र पीएच तटस्थ सूत्र समावेश गर्दछ जुन छिट्टै स्रोतमा ग्याँस र ज्वार घुसाउन सक्छ र तपाईंको पहिया सफाई समय निकै कम हुन्छ! प्रायः चाइल्ड क्लीनरहरू तपाईंको पहियामा हानिकारक हुन सक्छ र तपाईलाई सफा गर्न चाहनु भन्दा बढी भंग गर्न सक्दछ! ओपीएस मिश्र धातु पहिए सफाई किटले छिट्टै काम गर्न र जिद्दी धातु को प्रदूषण को भंग गर्दछ!
कारको शरीरको विपरीत, यसको रमहरू त्यहाँका सबै भन्दा कठिन अवस्थाको सामना गर्न सकिन्छ। हामी मूल्य वितरित गर्न र काम प्राप्त गर्न तरिकाहरू हेर्छौं
हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सकियो। रिम, टायर फ्लाइङ्ग क्लीनर उत्तम पहिया सफाई सूत्रहरू मध्ये एक हो, र हामी तपाइँलाई थाहा पाउन चाहन्छौं कि यो तपाईंको लागि के गर्न सक्छ। कार पाङ्ग्राहरू सफा गर्न गाह्रो हुनु हुँदैन! बस पानी संग मिश्रण गर्नुहोस्, र त्यसपछि यसलाई तपाईंको गंदे कार पाङ्ग्राहरूमा लागू गर्नुहोस्।
♦ रैपिड विघटन र फोम प्रचुर मात्रामा छ।
♦ यसले शक्तिशाली डिटेटोनमेन्ट कारकहरू समावेश गर्दछ, जुन तुरुन्तै दाग भंग गर्न सक्छ।
♦ उज्ज्वल कारक समावेश गर्दछ, व्हील हब पुरा गर्नुहोस्, यस उत्पादनको लामो-समयको प्रयोग गर्न सक्दछ आफ्नो गाडी पहेंलो को रूप मा चमकदार को रूप मा नया.
♦ सुरक्षा क्रोम रिम क्लीनर, सज्जन, तपाईंको हातको लागि हानिकारक लाग्दैन।
The कारको स्थिति ज्यादै गन्दा पनि भए पनि, यो OPS हेवी ड्युटी एलाय व्हील क्लिनरको लागि केकको टुक्रा हो!
OPS होममेड टायर क्लीनर लाभदायक सुविधाहरू:
♦ छिटो प्रवेश
स्वच्छ आयनों मा रिच र गहिरो प्रवेश संग जिद्दी गंदगी को नष्ट गर्न को क्षमता संग।
♦ नयाँको रूपमा सफा गर्नुहोस्
पहिएदार हबको अँध्यारो, लाशहीन र अन्य घटनालाई सुधार गर्नुहोस्, यसलाई मूल चमकमा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।
दाग, कटाई र ओक्सीकरणको क्षतिलाई रोक्नको लागि एक पारदर्शी सुरक्षा तह गठन गर्न सकिन्छ।
♦ द्रुत डिटेन्टमेन्सन
♦ सुरक्षित र पर्यावरण अनुकूल
विभिन्न पहिया हब सतहहरू, बायोड्रोड्रेडयोग्य र हानिकारक पदार्थहरूबाट मुक्तको लागि उपयुक्त।
कसरी एल्युमिनियम रिम्सबाट रस्ट हटाउने?
1। बैरलमा 2-3 चम्मच पाउडर टाँस्नुहोस्, यो पाउडर पहिले पहिला लगाउन र त्यसपछि पानी खानुपर्छ।
2। फोम पानीलाई हबमा राख्नुहोस् र सुरू गर्नु अघि केही मिनेटको लागि पानीको स्टीलको रिंगमा बस्न दिनुहोस्
यो उपकरण जस्तै स्पंज आदि। यो घरको टाढा क्लीनर र क्रोम रिम क्लीनर हो, हामीसँग पनि क्लीनर स्प्रे छ।
कारवाश स्टेशनको लागि। यो कामको लागि अझ सजिलो छ!
3। यसलाई सफा पानीसँग कुल्लाउनुहोस्। (या उच्च दबाव वाशिंगटन द्वारा सीधी सीधी)
4। अन्तमा, कपडासँग पकाउनुहोस्।
इञ्जिनबाट ग्रीसमा क्याक कसरी हटाउने?
हामी अनुकूल इञ्जिन क्लिनर Degreaser प्रदान, यो रिम क्लीनर सूत्र बाट बनेको थियो।
तल तपाईको पेशेवर इञ्जिन सफाई देखाउनुहोस्:
OPS कार सफा गर्ने आपूर्तिको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ? कृपया अधिक जानकारी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
कार व्हील क्लीनर निर्दिष्टीकरण पाना
ओपीएस इस्पात रङ स्व-सफाई एजेन्ट
उत्पाद निर्दिष्ट। 500g / 1 थैला
मूल्य यूएस $ 2.20 / थैला (एफओबी Ningbo / शंघाई)
ग्यारिटी अवधि 3-5 साल
MOQ 1 MT (2000 बैग)
वितरण दिन 15 दिन वरपर।
थप जानकारी, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
कृपया साबित गरेर तपाई मानव हुनुहुन्छ विमान.
NO.208, Dongxi औद्योगिक पार्क, Wucheng, जिन्हुआ, Zhejiang, चीन।